Ubuyile unobuhle wodumo | News24
Ubuyile unobuhle wodumo
ISITHOMBE : sithunyelweEzinye zezintokazi ezimodela ngaphansi kwe-Intabayabantu Models.
NGEMUVA kweminyaka engama-28 kwagcina ukuba khona umncintiswano wozime owaziwa ngo-Miss Teen Midlands High Schools, Intabayabantu Models inqume ukuwubuyisa.
Lo mncintiswano uzoba mhla ka-3 kuNdasa (March) ehholo lakaGezubuso ngo-11 ekuseni kanti ukungenela lo mncinciswano u-R50 umuntu ngamunye.
Umhleli walo mcimbi ophinde abe ngumsunguli we-Intoyabantu Models uMnuz Mbuso Nyandu uthe zingama-42 izikole ezizoba yingxenye yalo zime kanti zonke ziphuma eMgungundlovu nezindawo ezakhelene nayo.
“Lo zime into esasiyenza vele nakudala kodwa sabuye sashiya endleleni ngoba besesibheke kakhulu u-Miss KwaZulu-Natal Traditional. Into engiyiqaphelile wukuthi abantwana abasafunda isikole abathanda ukumodela bebe ngalitholi ithuba elikahle lokuthi bakhombise ithalente labo.
“Isikhathi esiningi bebe zithola sebencintisana nabantu abadala asebenezipiliyoni kwezo kumodela bese bona bagcine sebebukeleka phansi. Sifuna ukubanikeza leli thuba ukuthi baqhudelane bebodwa njengezikole,” kubeka uMnuz Nyandu.
Uthe ukubuyisa kwabo lo mncintiswano akukho mayelana nokumodela kuphela kodwa bafuna ukufundisa lezingane ezisakhulu indlela yokuziphatha ngaphambi kokuba ziphume ezikoleni zamabanga aphakeme ziyobhekana nempilo.
“Kuzobe kukhona abantu abaphuma ezindaweni ezahlukene nabazobe beyala bephinde bekhuthaze laba bafundi ngokubaluleka kwemfundo. Sifuna bazi ukuthi ngisho kungathiwa bakuthanda kangakanani ukumodela, imfundo iyohleli ihamba phambili. “Siyathanda ukubabona bephumelela kwezonobuhle kodwa kumele bebe nento abazobambelela kuyona [iziqu] uma kungukuthi akusalungi kwezokumodela.”
UMnuz Nyandu uthe lena sekuzoba into yaminyaka yonke ukuze abafundi bezohlala bekhuthazekile.
Inani lokungena u-R20 abadala kanti izingane u-R10.
Ukungenela lo mncintiswano kuzovalwa mhla zingama-31 kuNhlolanja (February). Uma uthanda ukwazi ngeminye imininingwane ungaxhumana noMnuz Mbuso Nyandu enombolweni ethi : 079 616 0059.